Creative Services - အရောင်းမြှင့်တင်ရေးမန်နေဂျာ WBNS | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » ဂျော့ဘ် » ကို Creative န်ဆောင်မှုများ - မြှင့်တင်ရေး Manager ကို WBNS
ယောဘသည်ဖွင့်ပွဲ: ကို Creative န်ဆောင်မှုများ - မြှင့်တင်ရေး Manager ကို WBNS
ရာထူး: ကို Creative န်ဆောင်မှုများ - မြှင့်တင်ရေး Manager ကို WBNS
ကုမ္ပဏီ: အဆိုပါ Dispatch ပုံနှိပ်ကုမ္ပဏီကော်ပိုရိတ်အဆင့်
WBNS-10TV ဖျော်ဖြေရေး, သတင်းများ, နှင့်ရပ်ရွာဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူ 60 နှစျကျြောအလယ်ပိုင်းအိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ WBNS-10TV "Lucy ရဲ့ကစားစရာဆိုင်", "Fritz ဟာညဇီးကွက်," နှင့် "Flippo သည့်လူရွှင်တော်အပါအဝင်အလယ်ပိုင်းအိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်ကတော့ထပ်အစီအစဉ်များနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအချို့အိမ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ "
ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ 10TV သတင်းအရည်အသွေးကို၏ထူးခြားချက်ဂုဏ်ပြုခြင်းသတင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်ဗဟိုအိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်ရဲ့အရေအတွက်ကတဦးတည်းရှေးခယျြမှု, ဒေသခံနှင့်ရပ်ရွာဝန်ဆောင်မှုအပေါ်တစ်ဦးအာရုံနှင့်အတူဟန်ချက်ညီသတင်းစာပညာဖြစ်ခဲ့သည်။ အရည်အသွေး programming ကိုအမြဲ 10TV များအတွက်ဦးစားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
WBNS နိုင်ငံ၏အရှည်ဆုံးရပ်နေသည်ကိုဖြစ်သော CBS affiliates တစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်ကျွန်တော့်ကိုအနည်းငယ်အမည်ကိုတို့အားဤသို့သောဒေါက်တာ Oz, အန္တရာယ်နှင့် Fortune မဂ္ဂဇင်း၏ဘီးအဖြစ်အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးစုစည်းတင်ဆက်အစီအစဉ်များရှိသည်။
WBNS 10TV ကိုလံဘတ်စအိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်အတွက်အင်အားကြီး CBS Affiliate အားလုံးပလက်ဖောင်းကိုဖြတ်ပြီးဗဟိုအိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်ရဲ့သတင်းခေါင်းဆောင်များ၏အမှတ်တံဆိပ်ခြီးမွှောကူညီရန် non-ရိုးရာနှင့်ရှေ့ဆက်စဉ်းစားတွေးခေါ်ပရိုမိုးရှင်း Manager ကိုငှားရမ်းရန်ရှာနေခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါစံပြကိုယ်စားလှယ်လောင်းကျွန်တော်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖန်တီးမှုနှင့်အတူစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအာကာသအတွင်း content တွေကိုပံ့ပိုးပေးသည့်အတိုင်းမိမိကိုယ်ကိုကြော်ငြာကိုဘယ်လိုအသွင်ပြောင်းကူညီပေးနေ၏ရှေ့တန်းအပေါ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒီအနေအထား, conceptualize ရေး, ထုတ်လုပ်, ဒစ်ဂျစ်တယ်လူမှုရေးဗီဒီယိုများ, ပုံရိပ်, PSA'S, TSRS နှင့်စျေးကွက် & Creative န်ဆောင်မှုများ၏ညွှန်ကြားရေးမှူးကဆုံးဖြတ်သည့်အခြားဖန်တီးမှုလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ရာမှအရာရာ shoot နှင့်တည်းဖြတ်ရန်ဖန်တီးမှုခဲအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။
အဆိုပါစံပြကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမျိုးမျိုးသောကင်မရာကို formats ကိုအသုံးပြုပြီးခြွင်းချက်အရေးအသား, တည်းဖြတ်ရေးနှင့်သို့မဟုတ်ဗီဒီယိုကျွမ်းကျင်မှုရပါလိမ့်မယ်။ သူ / သူမလွတ်လပ်စွာကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်ပါလိမ့်မယ် - နှင့်လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖြစ်နှင့်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့စီမံကိန်းများပိုင်ဆိုင်မှုတာနဲ့အဆုံး ဖြတ်. သူတို့ကိုမြင်ပါလိမ့်မည်သူကိုအသေးစိတ်များအတွက်အပြုသဘောနှင့်ဝေဖန်မျက်စိနဲ့ Self-starter ရှာကြ၏။
စိတ်ကူးကိုယ်စားလှယ်လောင်းအလင်းရောင်နှင့်ဂရပ်ဖစ်ထည့်သွင်းရန်အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူရုပ်သံ / ဒစ်ဂျစ်တယ်အလုပ်ထုတ်လုပ်အတွေ့အကြုံအနည်းဆုံးငါးဦး (5) နှစ်အပိုင်သငျ့သညျ။ တစ်ဦးကစျေးကွက်နှင့်သို့မဟုတ်သတင်းနောက်ခံအထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်ဖန်တီးမှုဝိညာဉျကိုတစ်ဦးမဖြစ်မနေပါ!
ဒီအလုပ်များအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းပြင်ဆင်မည်မယ်လို့သည်အခြားအခန်းကဏ္ဍကြော်ငြာအေဂျင်စီထုတ်လုပ်သူ / အယ်ဒီတာ, ရိုက်ကူးရေးခေါင်းဆောင်, အလွတ်တန်းဓာတ်ပုံဆရာ, အလွတ်တန်းထုတ်လုပ်သူ / အယ်ဒီတာသို့မဟုတ်ဖန်တီးမှုအကြောင်းအရာ marketer ပါဝင်သည်။
သတင်းစာပညာ, စျေးကွက်, ရုပ်ရှင်, ဒဏ်ငွေအနုပညာ, မီဒီယာအနုပညာ, ကြော်ငြာသို့မဟုတ်ညီမျှအတွေ့အကြုံကိုအတွက်တစ်ဦးကဘွဲ့
မျိုးစုံပလက်ဖောင်းတစ်လျှောက်အနည်းဆုံးငါးဦး (5) နှစ်ပစ်ခတ်မှုနှင့်တည်းဖြတ်ရုပ်မြင်သံကြားများတွင်အတွေ့အကြုံ, ဒစ်ဂျစ်တယ်, လူမှုရေးနှင့်သို့မဟုတ်ကြော်ငြာစာတိုပေးပို့ရေး
Adobe က Creative Suite ၏အားကြီးသော command ကို
WBNS 10-TV ကိုတစ်ဦးတူညီသောအခွင့်အရေး Equal Opportunity အလုပ်ရှင်ဖြစ်ပါသည်